MUUQAAL: Madaxwayne Farmaajo oo ka hadlay Rabshado iyo Dil ka dhacay Magaalada Muqdisho [Daawo] | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Madaxwayne Farmaajo oo ka hadlay Rabshado iyo Dil ka dhacay Magaalada Muqdisho [Daawo]
Apr 13, 2019 - 34 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si adag uga hadlay Dilka Wiil Bajaajle ah iyo Qof shacab ah oo la socday iyo Banaanbax Rabshado watay oo Muqdisho ka dhacay maanta kaasi oo Arintaasi ka dhashay.
Maanta wax aan Fiicneyn oo lagasoo gudbay ayaa dhacay,Askartii aan u tababarnay inay la dagaalamaan Cadawga, Askartii aan u tababarnay inay shacabka u naxariistaan mid ka mid ah ayaa dilay Wiilal dhallinyaro ah, Askarta waa laga helaa qaar Xun haba yaraadaan, Allaha U Naxariisto Wiilashii gacanteenna ku baxay”.
Madaxwaynaha ayaa shacabka ugu baaqay in aysan Gacantooda ku Qaadan Cadaaladda, Balse ay dawladooda ka warsugaan, Islamarkaana aysan gaysan Rabshado iyo Burbubur kale oo Cadowga u adeegaya.
Hadaad aragto farmaajo oo hadlo naftiisa ayuu u yaabay.
Hawiye aabihii dhakada ka wasa. Waxaa la mariyay astaahilkooda.
Arfarmaaja ii geeya.
Ciidanka pudland jooga waa darood. Lagama hadli karo.
Ciidanka kismaayo joogo waa darood. Lagama hadli karo.
Ciidanka xamar joogo waa qabiil waa in isku dhaf laga dhigaa.
Waxaas ayuu farmaajo bilaabay.
Dadkeygoow arinkaas ka fikira. Dadkeygoow fahan qabyaaladda farmaajo wado.
Xasan cali kheyre wuxuu ku fadhaa kursi hawiye laakiin waa lagu sheqeystaa. Yaan wax laga sugin fahma siyasadda.
Baafin saaxibkeey ina adeerkeey cadaado yaa arkay. Okiyaalihii ayaan u baahanahay.
Weli Hawiye waa isdaba gaban karaa. Waa inaad toostaan fahantaan Soomaalinimda in aan Hawiye ka ahayn wachman/waardiye.
Kelmada Hawiye waa muwaadiniin waa laydinku suuxinayaa. Waa lagu amaani siyaasad ahaana waa laydin cidhib tirayaa.
Tusaali Hirshabeele, Galmudug, Bamaadir waa la baa,biyay adoo arkaya! Ciidamadii ayaa lagaa safaynayaa adoo arkaya.
Dulgaad badan dulinimo ayuu kuu keenaa.
Wiil Hiiraab baa yaabay!
Hawiye maxaad u haystaa?
Bal noo sheeg waxa fiican ee aad Hawiye u hayso aan kula taageerno aniga Enjineer Cadaado e.
Anuu Hawiyaha u fikira sida Mr caado ayaan la safnahay.
Waar Hawiye dantooda ayaa ku jirta inay taageeraan dawlada.Imisa ayay soo dhimanayeen.
Adigu maxaad dawlada aan iskeed isku maamuli karin ee Somalia aad kusoo kordhisay?! Soow mahaa uun inaad halkan & mareegtan kakshaale ka dhahdo DALMIDA.
Iyadoo CASHUURTA BORAMA uu qaadanaayo ISAAQ?!
Markaad TAX ka ama canshuurta ku darsato Koonfur Aka Somalia baad SOMALINIMO ku andacoon kartaa!!
Aduunyada maanta la joogoo waad yaabaysaa uun.
Bal qof isagiii canshuurtiisaa lagaga qaadaayo Somaliland oo waliba nin dhigiisa ah oo ISAAQ ahi ka qaadayo buu dal & dhul aanu asal iyo shaqo ku lahayn ku dhex jiraa oo dhex boodayaa.
Xalay baan arkaayay AHMED SOMALI oo isaguna dhex boodayaa rag iyagii iska xiga oo ilmaadeer ah!!!
War Ma Anagaa Walaan Mise CADAN baaa laga heesayaa baan maqli jiray!!
Manchester United 1 – 0 West ham..LIVE..
Hawiye dantooda ayey dowladu ku jirtaa laakiin maaha midda hadda jirto.
Waxaan u baahan nahay dowlad qorshe siyaasadeed leh oo meel loo raaco leh.
Waxaan u baahanahay dowladda dagaal dhab ah la gasho alshabaab. Kana xureyso 2 shabeele.
Waxaan u baahanahay dowladda mideyyso canshuurta dalka. Ama wado qorshihii ay ku mideyn lahayd.
Waxaan u baahanahay dowladd dadkeeda u naxariisato.
Dowladda hadda jirto 2 iyo bar ayey jirtaa bal ii sheeg wexey dalkaan ka qabatay. Marka faanka iyo beenta laga tago.
Shaqadii loo idmaday wexey ka door biiday safar dalxiis. Mar ay sucuudi iyo turki lakala safato. Mar ay khadar iyo emaraad lakala safato. Mar ay Canada iyo sucuudi lakala safato.
Mr bahal anigu hadalada qaar kuguma tageersani waayoo indhaha ayaad ka xirataa qaladaadka jiro laakiin xooga saartaa in aad mucaaradka wax ka sheegto.
War anigu waxaan u baahanahay wax qabad muhiim maaha aniga hadalkeygu. Hadii wax cad la qabto qof walbo isagaa ku qancaayo.
Sidaan waxaa ii dhaamo anigoo maamul yar sameysto anigoo dhoho iska baxa dadka soo shaqa tegay. Anigoo sameysto banaadir state.
2 iyo bar halkii loogu dhiibay meel ka hooseyso ayey maanta baahashu joogtaa.
Dadkii waxaa la tusay qabyaalad. Muqdisho meesha kaliya ee farmaajo iyo dowladdiisa laga tageeray ayey ahayd laakiin maanta cid walbo wey nacday.
ACWW:Akhyaareey waan idin salaamayaa,in badan ayaan dusha idin kala socday.
@Garqaad si gaar ah ayaan ku salaamayaa talo yar aan kusiiyo marada yaysan kaa dhicin abti/seedi.Yaanay ku wasaqayn dhalinta u arka Xamar oo dhib ka dhaco in aqoonsi ku xiran yahay.
Xog badan waxaan kuu sheegayaa shacabka dhiigooda siyaasad ma galo please.
Xamar ma ahan tuuloiyinka aad sheegay it’s really our capital full stop.
Ciidanka muqdisho ma noqonkaro ciidan qabiil sidoo kale ciidanka qaranka,madax meel ka sareysaa oo la taabtaa ma jirto muqdisho waa sidaa,ninkii u arko in lagu gorgortamana wuu qaldan yahay.
Waan ka xuma hay askartan wuxuushta ah ee lacagta lagu siinsayo dilka shacabka waa siyaasad iimaan ili ah.Waxa dhacaayana waa taa
Aan kuu xaqiijiyo abtiyaashay haddii la isugu daro madaxweyne raisal wasaare iyo wasiirada oo dhan xaalku waa un sidan intooda aaminsan dagaalka.Waa kuwaas iyo in la mid ah wax qabaailka isticmaalaya shabab shacabka ayay ku dhex jiraan.
Muqdisho gacan bir ah oo aan cidna dulmin ayay u baahan tahay sababtoo ah dawlad lagama rabo haddii aynaan is qaban ma sidan baa Dan ah iyo in will yaroo reer waqooyi ah aamino in kalshaale hawiye ku aflagaadeeyo,bal u fiiro ereyada uu isticmaalayo ankee ixtiraamkii baa ka maqan adigoo laga yaabo in aad ka weyn tahay ayuu is tusay in internet lagugu diri karo somalida kale
Marada yaysan kaa dhicin,inagoo og in siyaasiyiin ku leh leeyihiin haddii beri laguu soo bandhigana aad dhihin doonto hawiye ayaa loo socdaa.
ilaa Hargeysa hoos imaaneyso Villa Xamar maamulka Banaadir State wuxuu gooni u yahey shacabka degan Greater Banaadir State.
Xassan Shiikh ayaan ka diidney inuu Canshuurta Xamar u qeybiyo Dooli iyo Doorshaan, hadana ka yeelimeyno Rasalwasaare Kheyre.
Madaxweyne Farmaajo waa Maamulaha Banaadir iyo Shabeelooyinka waajibka saaran waa danaha shacabka dhulkaas doortey.
Marba hadduusan maamulikarin Kismaayo, Hargeysa sheekada kumaba jirine soo maahan inuu xil iska saaro amaanka Banaadir State.
Hadana DABSHID baa yimid oo MR AKA BAHAL AH…
But still I can’t provereading!
Dee horta hadaad seedi iyo abti isu keey raacisay hadalku iga xiran
Midna aan kuugu darro cidbaa cid kugu direyso iska iloow anigaa kuu cadeynaayo anigu aragtideyda ayaan hadlaa sax iyo qalad. Dabcan cadaaladna uma arko in aad ii adeegsato.
Abti horta inta badan halkaan waa lagu kaftamaa. Halkaana waa looga tagaa.
Abtoow hadii gedo cabudwaaq kismaayo & dhamaan gobalada bari. Ciidan qabiil joogaan. Maxaa kalifaayo maanta in lagu doodo ciidanka xamar joogo waa qabiil ee waa in daadka lagu daraa lana sameyaa ciidan isku dhaf ah?
Somalidu waa qabiil gobal kasto waxaa joogo beesha u badan ciidankeda.
Markaan canshuurta dhibaa somali miyaan ahay. Markaan ciidanka u batana qabiil miyaan ahay?
Midna aan kuu xaqiijiyo anigu kama xumi mana quuri weyn kursiga farmaajo ama kheyre fadhiyaan mana ahan cadaalad in aan quuri waayo. Waayoo 18kii sanee ugu danbeysay. 2 madaxweyne iyo 3 raisulwasaare ayaan dalkaan kasoo noqday.
Laakiin abtoow halla adkeysto dowladda walbo sidaan ayaa loogu dheganaa mana aanan dhihi jirin yaan wax nalaga sheegin ee waan adkeysan jirnay nin xil qaaday eeda qaad.
Waxaan ku faraxsanahay weli maanan 20 qof oo hawiye ah oo farmaajo ugu banaan baxaayo qaab qabileysan.
Hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud wixii aderadaa ku sameyeen kuweydin maayo.
Wixii halkaan anigu aan ku qoro waa iga kaftan.
Man United 2 – 1 West Ham..LIVE 90TH’S MINUTES!!
Something is soo weird going on here on Kalshaake.com!
USC iyo SNM yaa gobsan, seedigeen Farmaajo ayaan Koofidii Villa Xamar u saarnay, idinkuna maxaa diidey in Governor Galeyr u saartan Koofida Villa Hargeysa.
– Noodaa Riyaale heena.
Something is soo weird going on here on Kalshaale.com
WTF is going on here..I thought MR BAHAL is a GUDEYBIIRSEY….and then Automatically became HAWIYE..or dogdamn I’m soo wrong!
Just confused anyway!!
Hargeysa oo ay ka bilaabatey No More Habar Awal ayaa Riyaale lakeenay,
Hadda Habar-Gidir oo bilowdey No more Abgaal ayaa Farmaajo la keenay.
Hadda waxaan leenahey, afku waa xor oo dhiig iyo maal ayaa loo hurey inuu shacabku makarafoon dheer ku hadlo waa halgankii Tubtii USC, laakiin gacantuse waa xirantahey oo ragbaa dalka soo gaarsiiyey meeshuu soo gaarsiiyey Madaxweyne Aadan Cadde
Qof aan ka yeeleyno ma jirto in Xamar lagu celiyo Qadkii Cagaarnaa ee Shiikh Shariif jebiyey.
Qofaan ka yeeleyno ma jirto in Maqaamka Xamar lagu maslaxeeyo nin Baabuur saaran.
* Xamar waa laga wada shaqeysan karaa laakiin lama wada sheegan karo
I’m still missing MR BAHAL.
Unless became a DABSHID!
Warkaasu waa igalay. Imaam.
War gacanta iga qabo. Hadaan taraaroxo.
War ninyohoow Dr xuseen xaaji kadare xaa kuu galo.
Nin Farmaajo ka Hiraab san Xamar ma joogo, waa ninka kaliya oo ay u dhinteen 15 Wiil oo Hiraab ah, mudaharaadkii Accord. Kampala, waqtigii Meles, Kuukuuyo iyo Biya qaadyo Kablalax dheheen la shaqeynmeyno Xamar ilaa Jaajuus Majeerten na loogu daro Dheriga.
– Farmaajo waa ogyahey inuusan Qub Moos ceel ka saarikarin.
Adigoo nin HAWIYE AH aka USC oo laandheeree ah ma ahayn inaad ID CARD kale noo samaysato oo la dhaho BAHAL ..GUDEYBIIRNA noo sheegato…
Waa cayaarahaa DAAROODKA..laakiin anaku Movie yadaas waxaan kasoo kiraysan jirnay THE BLOCKBUSTERS..iyadoo DVD ah.
Hanoola iman waxaas oo kale!!
Awoowe Mr bahal iyo dabshid. Isku luqadba kuma hadlaan. Laakiin waa laba nin oo aragti dheer. Mana hubisay arinkaas.
Mise waxaad leedahay marba shaar ayey soo xirtaaaaan kkkkkkkkk
Awoowee miyaad unaga hubtaa MR GENERAL AIDEED…
Inaga Hubso kheeyr allah hakusiiyee..
Nin GUDABUUR ah oo hadana canshuurtiisa udhiibayo WIIL ISAAQ ah..oo hadana dhex boodaayo HAWIYE…sifiican iinooga hubi..
DR Afsoomali Xariiqe ( Dr Kadare ) SOO Adeerkay maahan, Mar Uu London noogu yimid aad iyo aad ayaan uga naxey Duqnimo iyo Sonkor Macaan ayaa isugu darsamey.
Bood, Kadare, Cali Ugaas iyo Cali Mahdi waa Aabahey saaxiibadood.
Laakiin nin ku gaarey Geesinimo Bood kuma jirin- 1991 gurigiisa oo laamiga Lafweyne saaran ayuu shir ku qaban jirey Dr Bood, ( shaaha ayaan odashaasha u geynjirey anigoo moodo si Alle igu ogyahey “” In Max’ed Siyaad iyo Xusseen Kulmiye isku dembi yahiin).
Adeer Abshir Kaahiye ayaa dhihi jirey – War Boodow miyaadan ka cabsaneyn Max’ed Siyaad, markaas ayuu dhihi jirey ma waxaad i moodey inaan ahey SACAD ( War, Xaashi iyo Qalin u qaato xafiiska Max’ed Siyaad ).
Xagey ku dambeysan inuu Xusseen Kulmiye noogu sheekeyo Gurigii Odey Koogaar ee Kaaran ku yiiley, Siyaadna Gedo ka sheekeeyo.
* Waxey nabareen ( Qabyaalad) waxey na badeen (burbur) ayaa ka daran.
( War, Waraaq iyo Qalin) wuxuu ka wadey Dr Bood.
Sacadku war ayey u geeyaan Siyaad Bare oo waxey dhahaan dhibka Soomaali waxaa wado ( Reer Xaaji Saleemaan)
Waraaq wax loogu xariiqo ama Masaabiir uu dekedda keenay, canshuur dhaaf loogu qoro ayuu horey u sii qaadan.
Qalinka waxaa waaye , hadduu Max’ed Siyaad ku marnarsiyoodo – Qalin hadda mahayo aan wax ku saxiixo, kooda ayey jeebka ka soo saari – Anigaa hayo Madaxweyne.
– Bood waa ninkii Max’ed Siyaad ku dhahey Kacdoonka Xamar anigaa ka masuul ah, ee Tartiib u qulqul.
UNUKA yaabnay awoowee!
War ninyohoow waxaad kasoo jedaa qoys dabaqadda sare ahaa. Hadaadba.
Dr Bood Dr kadare cali ugaas cabdulle iyo cali Mahdi.
Dr bood waxaan ugu tegay gurigisii ku yiil garaash gedoole agtiisa bexaani. Beri uu ahaa raggi hagi jiray cali Mahdi.
Cali ugaas cabdulle beri uu gacan saar fiican lahaa. Jenerel caydiid iyo cismaan caato.ayaan bartay.
Adeer koogaarna waxaan ugu tegay guri uu ka deganaa suuqbacaad.
Cali Mahdi isaga waaba dagaalnay.
Dr kadare waa weligeey lama kulmin.
Waxaan saaxib aheyn jeclaana hilowla imaam. Allaya raxma.
Inta dad aan dhulkoogii iyo deegaan koogii CANSHUUR ka keeni karin HAYSKAGA BAXDO MOGADISHU..si dhakhso ah…
Waa DINIINTII UGU DANBAYSAY EEN SIIYAY SOO GALOOTIGA!!
GET OUT ALIVE👿
Waa inta hawiye laga rabo in uu dhoho. Afka alla ha goyee.
Kuwa woqooyi ka yimid marmarsiimo ayey leeyihiin waayoo canshuurtooda iyo ciidankooda waxaa lagu difaaca. Somaliland. Laakiin kuwa dalka ila sheegto hadana kursigii ugu sareeya dalka fadhiyo hadana dalka aan canshuur iyo ciidan kusoo kordhin bal maxaan ka dhegeystaa kuwaas. Sow wax shaamuug lagala daalo maaha.
Kuraasta 4.5 ciidanka iyo canshuurta kaligaa DHIIB sow doqonimo maaha.
Miyaan ku qaldanahay hadaan dhoho darood kursiga sare ma geeyo?
Wexey dhihi donaan garqaad waa qabiliiste.
War aan xisaabtano.
Don’t worry awoowe..Amarkaasi waa mid kasoo baxay..sOmalilander…Si toos ahna wuu u dhaqan galayaa Dhowaan…
Waxan lagu magacaabo ciidan mahan ciidan daacad ah oo tixgelinaya asluubta ciidamada, kala dambeeya ama geesi ah oo hoorin kara marka ay shabaabka iwm iska horyimaadaan.
Ciidanka waa in caqiida iyo akhlaaqda islaamka tababarkooda lagu daraa.
Sida saxda ah waxaa weeye in Xamar tahay magaalo lawada leeyahay. Sidaa oo kale gobollada Soomaaliyeed oo dhan waa kuwa umadda ka dhaxeeya. Laakiin waa caasimadda ama Qaranka Soomaaliyeed waa halkii laga sixi lahaa dalka. Haddii ay hagaagto Xamar ama hindhisto Xamar
Way wada hindhisayaan
Marka naga daaya beelaysiga iwm. Qaran Sidaa kuma dhismo
Miskiin keligiisa iska dhuusaya
Damn what a cheap diradaraale af bacaadh ah dhigahaya
Garaad markaad leedahay; “meesha waa lagu kaftama” MA Dal & Dadkiis baa kaftan gala?. *Adigu u hoggaan sanow sOmalilanderKA mooday inay luuqadda Ingriskku ay aqoon & caqli u siyaadinayso.
°§*Dabshid adeer, AUNTE Bood isku xisbi baanu ahayn WAXAANA u badnayn Xafiiskiisi Boostadi hore & Gariisada u dhawaa Markuu Cali Mahadi baxsadayna Hoteelki X.Yuusuf Hawiye. *Qalloocow intuu ku dambay?. *Waagaaba waxaan diyaar u ahayn inuu LOP waddanka madax ka noqdo LAAKIIN waa nala qarqiyay-Batay.
*30sano ka dibna Garqaad qabiil buu ololayn. MA GUDBE. WBT